Ubunzululwazi bekhompyutha C & C ++ Programming
by UDavid Bolton
C # yenye yeelwimi ezidumileyo kwiilwimi ze-PC
C # yinjongo yoqhelwano lwenkqubo ejoliswe kumxholo ophuhliswe kwi-Microsoft kwaye ikhutshwe ngo-2002. Iyafana neJava kwi syntax yayo. Injongo yeC # kukuchaza ngokucacileyo uchungechunge lwemisebenzi eyenziwa yikhomputha ukwenza umsebenzi.
Ininzi C # imisebenzi ibandakanya ukusetyenziswa kwamanani kunye neetekisi, kodwa nayiphi na into eyenziwa yikhompyutheni ingakuliswa kwiC #. Iikhomputha zineenkcukacha-kufuneka zixelelwe ngokuthe ngqo ukuba zenzeni, kwaye izenzo zabo zichazwe yilwimi yokusetyenziswa oyisebenzisayo.
Emva kokucwangciswa, banokuphinda amanyathelo ngamaxesha amaninzi njengoko kufuneka kwijubane eliphezulu. Ii-PC zanamhlanje zikhawuleza zikwazi ukubalwa kwiibhiliyoni ngemizuzwana.
Yintoni enokuyenza yeC # Inkqubo?
Imisebenzi yohlobo lweprogram iquka ukufaka idatha kwiziko ledatha okanye ukuyikhupha, ukubonisa imifanekiso esheshayo kwimidlalo okanye kwividiyo, ukulawula izixhobo zecomputer ezifakwe kwi-PC kwaye udlala umculo okanye umsindo. Ungayisebenzisa nokuba ubhale isofthiwe yokuvelisa umculo okanye kukunceda udale.
Abanye abaphuhlisi bakholelwa ukuba i-C # ithambe kakhulu kwimidlalo kuba ityhilwa ngaphandle kokuqulunqwa. Nangona kunjalo i-.NET Framework iqulunqa ikhowudi echaziweyo okokuqala.
Ngaba iC # Iilwimi zoLwimi oluPhambili?
C # luhlobo lolwimi olusekelwe kakhulu. Uninzi lweelwimi zekhompyutheni lubhaliweyo ngenjongo ethile, kodwa i-C # yinjongo yolwimi jikelele kunye nezixhobo zokwenza iinkqubo ezinamandla.
Ngokungafani neC ++ kwaye kwizinga elingaphantsi kweJava, ukuphathwa kwesikrini kwi-C # kukugqwesileyo kuzo zombini idesktops kunye newebhu.
Kule nxaxheba, iilwimi ze-C # ezithathwe njenge-Visual Basic ne-Delphi.
Unokufumana okunye malunga nezinye iilwimi zokusetyenziswa kunye nendlela ezithelekisa ngayo.
Ziziphi iikhomputha ezinokugijima C #?
Nayiphi na i-PC ekwazi ukuqhuba i-.NET Framework ingaqhuba ulwimi lwe-C # lwenkqubo. I-Linux isekela iC # isebenzisa umqambi we-Mono C #.
Ndiqala njani ngeC #?
Ufuna iC # compiler.
Kukho inani lezentengiso kunye neenkululeko ezikhoyo. Inguqu yezobugcisa zeVisible Studio ingaqulunqa ikhowudi ye-C #. I-Mono yi-C # ifayile yamahhala kunye nevulekile.
Ndiqala njani ukubhala C # Izicelo?
C # ibhaliwe usebenzisa umhleli wombhalo. Ubhala inkqubo yekhomputha njengoluhlu lwemiyalezo (ebizwa ngokuba yizitatimenti ) kwenkcazo ekhangelelana neefomula ezincinane. Umzekelo:
> int c = 0; fuduka b = c * 3.4 + 10;
Oku kugcinwa njengefayili yombhalo uze uqulunqwe kwaye uqhagamshelwe ukuvelisa ikhowudi yomatshini oya kuqhuba ngayo. Uninzi lwezicelo ozisebenzisayo kwikhompyutheni zabhalwa kwaye zihlanganiswa njengaye, zininzi zazo kwiC #.
Ngaba kukho i-C # Source Open Code?
Akunjalo nakwi Java, C okanye C ++ kodwa iqala ukubizwa. Ngokungafani nezicelo zorhwebo, apho ikhowudi yomthombo ephantsi kweshishini kwaye ingakhange ifumaneke, ikhowudi yomthombo ovulekile ingabonwa kwaye isetyenziswe ngabani na. Yindlela ehle kakhulu yokufunda ubuchule bokubhala.
I-Market Job yeC # Programmer
Kukho ubuninzi be-C # imisebenzi ngaphandle apho, kunye neC # inenkxaso yeMicrosoft, ngoko kuya kwenzeka ukuba ijikeleze ixesha elide.
Ungabhala imidlalo yakho, kodwa uya kufuneka ube ngumculo okanye udinga umhlobo womculi ngoba ufuna kwakhona umculo kunye nemisindo.
Mhlawumbi unokukhetha umsebenzi njengomqhubi weprojekthi ye-software ukudala izicelo zoshishino okanye njengonjiniyela weprojekthi.
U phuhliso lweMidlalo .
Ndiya kuphi na ngoku?
Ixesha lokufunda iprogram kwi C #.
Ndingayifumana njani kwiProgram njengomsebenzi?
Uphuhliso lwe-iOS kwi-C # kunye ne-Xamarin Studio kunye ne-Visual Studio
Umdlalo kwiNkqubo yeC tutorial 4
Yiyiphi iComputer Compiler?
Imiyalelo yokulanda nokufaka i-Visual C ++ ye-2005 Express Edition
Funda kwiNkqubo: Yiya kwiTutorial One
Yintoni Ubunjineli beSoftware?
Imidlalo yokudlala kwi C # usebenzisa i-SDL.NET Tutorial One
I-Permiso de residencia i-green card por matrimonio gay o de lesbianas
Iimpazamo eziqhelekileyo kwizifundo zeebhilidi
Uluhlu lwe-Movie Classic
IGranville T. Woods: I-Black Edison
Ukunqoba Ukuthetha Ngokuxhalabisa Xa Uthetha IsiFrentshi
IYunivesithi yaseMzantsi e-New Orleans
Ukunyamekela Ingqumbo Yakho Yokunyuka
Ubani Ubugcisa bePaleolithic?
Iyiphi i-Software Best Publishing Software?
Iqhosha leVidiyo IsiGama neSifundo seNcoko
Endor kunye nokuqhutyelwa kweNkwenkwezi yeSibini yokuFa
'Qurano de Bergerac' Quotes
Iblasi yeBallet yabaQaleli
Indlela yokuthabatha imithombo yoGogo